Izindlebe Zokugcina Zengeza Ukuhlanganiswa Kwe-Spotify Yenkinobho Yomlingo | Izindaba zamagajethi
Izindlebe Zokugcina zengeza ukuhlanganiswa kweSpotify ngeNkinobho Yomlingo
Yile ndlela esimemezele ngayo esihlokweni salezi zindaba, inkampani i-Ultimate Ears isanda kufaka le Ukuhlanganiswa kwe-Spotify yamadivayisi ane-Magic Button etholakalayo, kulokhu okuyi-Ultimate Ears BOOM 3 ne-MEGABOOM 3.
Kepha kungenzeka kanjani ukuthi lokhu kungaqali kusukela ekuqaleni noma ukwethulwa kwe-UE entsha? Yebo, isizathu asicaci kepha ebesikwazi ukuthi yilokho I-Magic Button isebenza ne-Apple Music ne-Deezer PremiumKusukela yasungulwa futhi kwakumangaza ukuthi ayisebenzanga neSpotify, manje isiyasebenza ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, inkampani uqobo ithi sebevele bahlela ukwengeza izinsiza zomculo esikhathini esizayo esingekude kakhulu.
I-Ultimate Ears BOOM 3, isikhulumi sendawo yonke nayo yonke ikhwalithi
Izindaba kuleli cala ukuthi kusukela namuhla Abasebenzisi be-Android bangafinyelela kuhlu lwadlalwayo lwe-Spotify, ama-podcast, nokuningi ngokuthinta nje le nkinobho engezwa enguqulweni yakamuva yezipika ze-UE. Amandla nekhwalithi emigqeni ejwayelekile yalezi zikhulumi ngokungangabazeki ingenye yamandla kepha ukufika kwenguqulo ye-BOOM 3 neMEGABOOM 3 kungeze i-Magic Button manje ekuvumela ukuthi uthole okuthe xaxa kusipika.
Kusuka ku-Android version 5.0 kuye phambili
Kulokhu, enye yezimfuneko zokusebenzisa lo msebenzi kudivayisi yethu ye-Android ayikho ngaphandle kokuthi ivuselelwe kunguqulo ye-Android 5.0 noma ngaphezulu, ngakho-ke kucatshangwa ukuthi cishe wonke amadivayisi azokwazi ukujabulela lokhu okusha isici esisodwa. Singaqala futhi silawule i-Spotify kalula noma ngabe silalele izingoma entabeni noma sisephathini phezu kwendlu, i-Ultimate Ears yenza kube lula kunakuqala ukufinyelela izingoma zethu esizithandayo nokulawula isigqi sakho. Lawa ngamanye amagama Isikhulu esiphezulu se-Ultimate Ears uCharlotte Johs ngesikhathi sokwenza lezi zindaba zibe sesidlangalaleni:
Izipikha ze-BOOM 3 ne-MEGABOOM 3 zishintshe indlela esilalela ngayo umculo ngokulula nokuhlanganiswa okulula kwe-Magic Button. Sihlala sengeza izici ezintsha esigabeni sesipikha sethu se-premium, futhi i-BOOM 3 ne-MEGABOOM 3 zihlala ziba ngcono ngokwengeza ukusekelwa kwe-Spotify kumadivayisi we-Android.
Njengoba sichazile ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ekubuyekezeni esikwenzile ngomkhiqizo ku-Actualidad Gadget, i-BOOM 3 entsha ne-MEGABOOM 3 yengeze inkinobho ebizwa nge-Magic Button evumela umsebenzisi ukuthi adlale, ame kancane futhi eqe amathrekhi ngqo kuzipikha, ngaphandle kokuthi ukucinga ifoni yakho ephaketheni lakho noma kwelinye igumbi. Manje abasebenzisi bamadivayisi ane-Android operating system kanye ne-akhawunti yensiza yokusakaza umculo, i-Spotify, banenketho yokufinyelela umculo wabo nge cindezela isikhathi eside inkinobho futhi ngaleyo ndlela baqale uhlu lwadlalwayo abaluthandayo, ama-albhamu, izingoma nama-podcast, futhi bangakwazi yeqa izinhla zokudlalayo ngokucindezela futhi.
Okudingekayo kuphela ukuze ukwazi ukusebenzisa le nsizakalo ngaphezu kokuba ne-Android 5 noma ngaphezulu kudivayisi yakho yeselula futhi ngokusobala ukuba ne-akhawunti ku-Spotify isevisi yomculo yokusakaza ukukwenza kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula lwe-BOOM ne-MEGABOOM kusuka ku-Ultimate Izindlebe. Lolu hlelo lokusebenza lungalandwa esitolo se-Google Play naku-App Store mahhala futhi ngaleyo ndlela uqale ukujabulela zonke izinketho ezikunikezayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Izipikha » Izindlebe Zokugcina zengeza ukuhlanganiswa kweSpotify ngeNkinobho Yomlingo
Ungalithola kanjani ifayela elisusiwe leZwi
Izincomo zethu ezizwakalayo zalolu Lwesihlanu Olumnyama 2019